OROMOONNI DIYAASPOORAA….!!!! – Welcome to bilisummaa
Lubbuu qaalii diinni galaafachaa jiraa
Duuti isaaniis hedduu nama mararaa
Nuti warri biyya alaa maal gochaa jirra?
Akkamiin callifte Oromoon diyaaspooraa?
Barattoota nagayaa guddinaaf teessu,
Abdii boruu karatti yoo hambisu
Ayaa hegeree qaxara hoggaa cabsu,
Lubbuu isaanii diinni yeroo baasu,
Warri lafa alaa maalumaaf tatteessu?
Akkamiin dadhabdan addunyaatti labsuu?
Dhaabbiilee mirga namaaf falman,
Motummoota rakkoo teenya hubatan,
Miidiyaa dhimma keenya gabaasan,
Isaan biraan gahuu akkamiin dadhabdan?
Kanneen dhumaa jiran obboleeyyan keenyaa
Ijaanis agarree gurraanis dhageenyaa
Naasuu waliif dhabnee usnee maa tatteenya?
Duuti isaanii maaliif nun mararre?
Harka marannee maaliif callifnaree?
Hidhii ciniinnachuun humaa hinjijjiiruu
Bakka maraa ka’ee namuu haa hiriiru!
Iyya dhageessisaa addunyaatti himaa
Ka’aa wal kakaasaa nuutu waliif dhimmaa!
Previous Oromo TV: 15th Anniversary Celebration of Oromo TV
Next Finciloota Ummanni Oromo bulchitota embaayira ethiopia irratti duri kaase hamma ammatti gad-geysaa turani fi ittis jiran barreyfama armaan gadi keysatti walin laalu yaalla.